Archive du 20191015
Andry Rajoelina Manomana propagandy
Tamin’ny fampielezan-kevitra dia nilaza fa hatao ny làlam-pirenena faha-44. Ianareo no tsy mahavita fa I Andry Rajoelina sy ny vahoakan’Ambatondrazaka tsy maintsy mahavita. Saropady loatra ny velirano ka tsy maintsy tanterahina, hoy ny Filoha Rajoelina tany Ambatondrazaka omaly.
Antoko PSD “Masina amintsika ny fototry ny Repoblika”
« Feno 61 taona ny nahazoantsika malagasy ny Repoblika, izay tsiahivina fa azontsika tamin'ny 14 oktobra 1958.
Kaominina Ambohimanambola Vonona sy tsara tsodrano ny kandidan’ny TIM
Notanterahina ny sabotsy 12 oktobra lasa teo tao Ambohipeno ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo kandidan’ny antoko TIM ho an’ny kaominina Ambohimanambola.
Politika sy fifidianana Mivonona amin'ny zava-drehetra ny TIM
Na eto an-toerana na any ivelany dia efa vonona ny mpiara-miasa sy ny mpanohana ny kandida atolotry ny antoko Tiako i Madagasikara eto Antananarivo Renivohitra Rina Randriamasinoro,
Fanaraha-maso ny fifidianana Hiasa am-pitiavana ny KMF/CNOE
Efa miparitaka manerana ny distrika ny fiarahamonim-pirenena KMF /CNOE.
Zandary tsy nanaja zon’olombelona Niditra an-tsehatra ny masoivoho iray
Manoloana ny fihetsika tsy manara-dalàna, tsy manaja ny zon’olombelona,
Mampanahy ny tohin’ny Bakalorea Nitombo 59 ny voasambotra, 19 any am-ponja
Tafiakatra 59 ny olona nosamborina tamin’ny raharaha bakalorea. 19 notanana vonjimaika any am-ponja, ary 7 no arahin’ny fitsarana maso akaiky na “sous contrôle judiciaire”,
Fandehanana fiaramanidina eto Tsy mba natao ho an’ny Gasy kely mahatra...
1 100 000 ariary ny saram-piaramanidina Antananarivo-Toliara. 1 200 000 ariary indray, Antananarivo-Sambava. Raha hihazo an'i Toamasina miainga eto Antananarivo dia 500 000 ariary.
Antananarivo Renivohitra Tsy rariny intsony ny havoretrana...
Mivalan-drano etsy sy eroa, manary fako eny rehetra eny... Santionany ireo.
AMPANGABE - ORINASA MPANDRENDRIKA VY Tratra nampiasa zaza tsy ampy taona
Orinasa iray mpandrendrika vy eny Ampangabe eny no fantatra fa tratra nampiasa zaza tsy ampy taona, ankizy izay mbola tokony hianatra sy hovelomin-dray aman-dreniny.
AMBANDRIKA – MANAKARA Trano 585 tafo indray kilan’ny afo
Trano 585 tafo no indray kilan’ny afo hotohoto tsy nisy noraisina intsony omaly atoandro tokony ho tamin’ny 12 ora tao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambandrika, kaominina ambanivohitr’i Manakara.
Manakara Olona 54 voapoizina ara-tsakafo
Olona manodidina ny 54 no mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly Manakara amin’izao fotoana izao, noho ny fanampoizinana ara-tsakafo nohanin’izy ireo.
TALATA-VOHIMENA MANANDRIANA Dahalo 1 lavo, kalaky 1 azon’ny fokonolona
Resin’ny tanam-polo ny dahalo 30 nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika.
TANANDAVA BEKILY Mpiandry vala lavo, omby 56 tafaverina
Efa naverina amin'ny tompony ao Satra Tanandava ny omby miisa 56 raha maty voatifitra ny 3.